नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति डा. यादवको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै
सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति डा. यादवको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै
कांग्रेस, एमाले र अन्य साना दलले बजेटका लागि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आग्रह गर्ने भएका छन् । वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेकाले सहमतिविना अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने उनीहरूको अडान छ । सरकारबाहिर रहेका दलले मंगलबार साँझ राष्ट्रपतिलाई भेटी ज्ञापनपत्र दिने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार साँझ बसेको बैठकले सहमतिविना अध्यादेशबाट सरकारले ल्याउन लागेको बजेट रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेट रोक्न राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भयो,’ बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले भने, ‘दलीय सहमति विपरीत कुनै निर्णय लिने सरकारको हैसियत छैन ।’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा डा. बाबुराम भट्टराई संविधानत: प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भैसकेको वर्तमान अवस्थामा कामचलाउ सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गराउन खोज्नु तथा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जान खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न नसकिने उल्लेख छ । सरकारले दलहरूको सहमति विपरीत निर्णय लिन सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले मुलुकभरि आन्दोलन गर्नेसमेत निर्णय गरेका छन् । कस्ता आन्दोलका कार्यक्रम गर्ने भन्ने गृहकार्य गर्न कांग्रेस र एमालेलाई जिम्मा दिइएको छ ।